कुलमान बन्ने कि 'कुल म्यान' ?- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कुलमान बन्ने कि 'कुल म्यान' ?
भाद्र २०, २०७७ मनोज पण्डित
काठमाडौँ — अप्ठ्यारो, असहजता, अभाव, अन्यौलता आदि हुनु समस्या होइन । समस्या तब हो जब मानिससँग कुनै पनि परिस्थितिको लागि विकल्प हुँदैन । विकल्प नहुनुमा समस्या हुन्छ । एउटै कुरा दोहोरिरहनुमा समस्या हुन्छ । र दोहोराइरहन बाध्य हुनुमा समस्या हुन्छ । अर्थात् बाध्यतामा मूल समस्या हुन्छ ।
कुलमान घिसिङलाई सरकारले विद्युत प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा दोहोर्‍याएन भने आउने दिनमा लोडसेडिङको मार खप्नु पर्नेछ भन्ने डरले अहिले धेरैको मनमा ढ्यांग्रो ठोकिसक्यो । कुलमान नदोहोरिनु भनेको मुकेस काफ्ले दोहोरिनु हो भन्ने डर सामाजिक सञ्जालको भित्तामा स्पष्ट देखिँदा एउटो कुरो के सोच्न बाध्य भइयो भने कुलमानभन्दा मुकेस कैयौं गुणा शक्तिशाली रहेछन् ? कि सारा नेपाली उनको नामबाट काँपी रहेछन् । 'शोले' भन्ने हिन्दी फिल्ममा गब्बरको नामैबाट दूर दूरका मान्छे काँपेजस्तै । किन यति धेरै डर छ नेपाली जनतामा ? यो देशको सार्वभौमसत्ताको मालिक, संविधानका निर्माता नेपाली जनता कुलमान जालान् र मुकेस आउलान् कि भनेर डराउनु पर्ने ? कस्तो कमजोर र दयालाग्दो यथार्थ हो यो ?
एउटा संस्थामा कुनै एकजना व्यक्ति आए पनि जो गए पनि नडराउन पर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने हैन नेपाली जनताले ? यत्तिमा डराउने नेपाली समाजलाई त जो कसैले पनि कुल्चिदिन, ढालिदिन सक्छ । त्यसको उदाहरण हामीले बारम्बार देखेका छौं निर्मला पन्तदेखि कोरोना कहरसम्म । अबको मूल प्रश्न यो हो कि डरको नियतिलाई कहिलेसम्म बोकेर हिँड्ने ? या यो नियति भित्रबाट यस्तो नियतको निर्माण गर्ने हो जसले भन्छ अब नेपाली जनता कसैसँग पनि डराउँदैन र मिठा ललीपपहरुमा पनि फँस्दैन !
मानौं एकपट फेरि दोहोरिए । के यसले नेपाली जनताका समस्याहरु समाधान हुन्छन् ? हामीले खुद्रामा समाधान खोज्ने हो कि समग्रतामा, थोकमा समाधान गर्ने हो ? नेपाली जनताले आफ्ना लागि निर्णय गर्नै पर्छ । आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने हरेक तत्व, संरचना ,प्रणाली र अवधारणाहरुलाई त्यसरी प्रभाव पार्ने हो ता कि अब कसैले नेपाली जनतालाई ठग्न नसकोस्, झुक्याउन नसकोस् र अलमलाउन नसकोस् । त्यसका लागि नेपाली जनताकै चेतनाको नैतिक धरातलको परिमार्जन, विवेकपूर्ण सहभागिता र दुरदर्शी कथ्य निर्माणको आवश्यकता रहेको छ ।
म कुलमानले विद्युत प्राधीकरणमा गरेका कामको प्रशंसक हुँ । उनले हामीले भोगिरहेको अन्धकारलाई हटाउने काम गरे । तर अर्को पक्षबाट हेर्दा कुलमान दोहोरिनु भनेको फेरि पनि हामी प्रणाली होइन, व्यक्तिकै शरणमा परेको हुनजान्छ । एकजना व्यक्तिको क्षमता र इमान्दारीबाट समाजले र देशलाई फाइदा हुन्छ । कुलमानको लोकप्रियताबाट पनि यो कुरा देखिन्छ । तर अर्को यथार्थ के पनि हो भने व्यक्ति जतिसुकै सक्षम भए पनि एउटा ठाउँमा सँधैभरी एकैजना व्यक्ति रहन असम्भव हुन्छ । चाहे त्यो विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको कुर्सी होस् वा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी । हामीले त हाम्रो प्रणाली र काम गर्ने सिस्टमलाई नै यति बलियो र चुस्त बनाउने तर्फ पहल गर्नुपर्‍यो ताकि हामी कुलमान आउँदा खुशी हुनेमात्र होइन कि भोलि अर्को कुनै व्यक्ति आउँदा पनि डराउनु नपरोस् । हामीले व्यवस्था र व्यवहारलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरौं, ताकि कसैले बदमासी गर्न नसकोस् । गरेको खण्डमा उ तुरुन्त कारबाहीको भागिदार होस् ।
सबै ठाउँमा एकएकजना व्यक्तिले मात्रै व्यवस्था र प्रणालीलाई धान्ने हो भने यसले नेपाली जनताको व्यक्तिकेन्द्रित परनिर्भरतामा टेवा पुर्‍याउँछ । व्यक्तिमा नायक खोज्ने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त हाम्रो समाजको यो अर्को कडी हो जसले चरित्र प्रवृत्तिलाई विश्लेषण र बहसको केन्द्रमा कहिले राख्न चाहेन र त्यसमा रुपान्तरण, परिमार्जन र समृद्ध गर्नतर्फ कहिले ध्यान दिएन । यो नेपाली बहुल समाजको असफलता हो ।
झुक्किएर एक दुई जना मात्र आफ्नो पेशा मार्फत समाज सुधारका लागि पास हुने प्रवृत्ति र प्रचलन स्थापित भइरहँदा हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र सामाजिक प्रणाली कुन रूपमा फेल भएको छ भनेर अब मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने होइन र ? यो आफैंमा फेल्ड (अनुतिर्ण) समाजमा पास भएका व्यक्तिहरुलाई महानायक बनाउन खोज्नु कुनै नौलो कुरा भएन तर आफूलाई पूनरावलोकन गरेर पास गराउनेतर्फ आँखा चिम्लनुचाहिँ दुःखद परिदृश्य हो । अनुत्तीर्ण समाजको नियति दुख पाउनु र दासतामा बाँच्ने नै हुन्छ । स्वतन्त्र हुन र वास्तवमै समृद्ध हुन समाज आफू नै उत्तीर्ण हुनुपर्छ र समाजको परीक्षा हरेक व्यक्तिको जीवनका अभाव, पीडा, अन्याय, विभेद र सपनाले गर्छ । यो असफल समाज डिस्टीङ्सन ल्याएका कुलमानलाई काँधमा लिएर हिँड्न चाहन्छ, अहिलेको प्रकरणको निष्कर्ष यही हो ।
कुलमानले विद्युत प्राधिकरणमा राम्रो काम गरे । तर व्यक्तिकै सफलतामा वा एकदुईको प्रतीभा नै सारा समाजको आशा टिक्ने हो भने अरु कति क्षेत्रमा कुलमान छन् ? त्यहाँ पनि त्यस्तै क्षमता र इमानदारीका मानिस किन भएनन् । सम्पूर्ण समाज सफल हुने हो भने सबै ठाउँमा सक्षम मानिस पुग्नुपर्ने होइन ? सक्षम मानिसलाई काम गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने संयन्त्र देशले बनाउनु पर्ने होइन ? राजनीतिले बनाउनु पर्ने होइन ? त्यो नहुँदा हामी एकदुईजना झुक्किएर भेटिने मानिसलाई निर्विकल्प बनाएर बस्न बाध्य छौं । मुकेसलगायत को डरले कुलमान- कुलमान भनिरहँदा तेस्रो सम्भावनाको ढोका बन्द पनि भइरहेको हुनसक्छ । कुलमानले एउटा मानक बनाइसकेको स्थितिमा अब आउने जोकोहीले पनि त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न अझ नयाँ दृष्टिकोणले केही विशेष उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । तर, यदि उसले फेरि मुकेश काफ्लेको समयको जस्तो लोडसेडिङ तालिका दिन थाल्यो भने उसलाई हटाउन सक्छौं भन्ने चुनौती समाजले गर्ने सक्नुपर्ने बनाउन आवश्यक छैन र ?
यो केवल विद्युतमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा सबैका लागि न्यूनतम उपलब्धिको सीमारेखा अब कोर्नुपर्ने होइन र नेपाली जनताले अब ? विद्युत प्राधीकरणमा पाएको सफलता अरु क्षेत्रमा समाजले किन पाउन सकेको छैन ? यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्दैन अब ? राम्रो व्यवस्थापन हुँदा असम्भवजस्तो लाग्ने लोडसेडिङ हट्यो । अरु क्षेत्रमा जिम्मामा बसेका मानिसले चाहिँ किन सकिरहेका छैनन् ? के त्यो ती व्यक्तिको मात्र असफलता हो कि समग्र व्यवस्था र प्रणालीको ? यो प्रणालीको नेतृत्व गर्नेहरुसँग प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएन ?
यसका लागि मलाई लाग्छ, सबभन्दा महत्वपूर्ण त नेपाली जनताले सुत्ने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्‍यो । कसैलाई उचालेर कुर्सीमा राखिदिने बित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ भनेर आफू मस्त निदाउने प्रवृत्तिका कारण कुर्सीलाई अनावश्यक शक्ति दाइजोको रुपमा सुम्पिदिइरहेका छन् । र यसको फाइदा कुर्सीवालाले लिइरहेको छन, एकदुई जनाले बाहेक । यसले गर्दा त्यसरी काम गर्ने मानिसलाई मान्छे होइन देवता नै मानेर पूजा गरेर त जनता रमाउँछ तर ती अधिकांश जसले उसको निद्राका बेलामा लुट्नु लुटेका छन्, तिनीहरूलाई ऊ केही गर्न सक्दैन,आफ्नो टाउकोमा हात राखेर बस्नुबाहेक ।
यदि ऊ नसुतेर हरक्षण सचेत, क्रियाशील र विवेकपूर्ण भएको भए कसैले पनि उसलाई लुट्न सक्दैनथ्यो । यहाँ समस्या लुट्नेमा मात्र होइन, लुटिनेमा बढी देखियो । लुटिनेको कुम्भकर्ण निद्रामा बढी समस्या देखियो । अब यो सुत्ने प्रवृत्तिबाट जाग्नु पर्ने हो र जागिरहनु नै पर्ने हो । यो देशका हरेक मानिसको लागि हित हुने सामूहिक नीति निर्माण, योजना निर्माण र कार्यान्वयन तथा विचार छनौट र स्थापित गर्ने पथमा देशका हरेक नागरिक कटिबद्ध हुने बेला हो ।
त्यसका लागि केवल छनौटको अधिकारमात्र होइन रिजेक्ट (अस्वीकार) को अधिकारलाई पनि क्रियाशील बनाउने हो । यस्तो अवस्थामा मात्र मुकेस प्रवृत्ति हावी हुन पाउँदैन र कुलमान प्रवृत्तिले मौलाउने र स्थापित हुने अवसर पाउँछ । अबको आवश्यकता क्रियाशीलताको हो । क्रियाशीलताको अर्थ उर्जाशील हुनु हो ।
उर्जाशील मान्छेहरु आफैंमा कुलमान हुन् तर ती सुतेर बस्नेहरु चाहिँ कुलमान हैनन् उनीहरू 'कुल म्यान' हुन् । 'कुल म्यान'को अर्थ चिसो मान्छे । भनिन्छ मानिस मरेपछि वा उसको शरीरमा कुनै उर्जा नभएपछि चिसो हुन्छ । जिउँदा मान्छेहरू ताता हुन्छन्, उनीहरूको उर्जा हुन्छ शरीर र मस्तिष्कमा । अब निर्णय लिने बेला आएको छ हामी कुलमान बन्ने कि 'कुल म्यान' ?
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७७ १६:३६
उपत्यकामा २४ घन्टामा थप ४ सय ८ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ — पछिल्लो २४ घन्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप ४ सय ८ जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । काठमाडौँमा ३२६, ललितपुरमा ३७ र भक्तपुरमा ४५ जना संक्रमित देखिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबार जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ घन्टाको अध्यावधिक विवरणअनुसार सुनाउने क्रममा शुक्रबार उपत्यकामा ४ सय ५४ जना कोरोना संक्रमित फेला परेको जनाएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट ७ लाख ५७ हजार ९६३ परीक्षणहरु गरिएका छन् । त्यसैगरी २४ घण्टामा जम्मा १२ हजार ४७३ पीसीआर परीक्षण भएका छन् ।
हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या ६ हजार ७०१ जना रहेका छन् । त्यसैगरी सकृय संक्रमितको संख्या १७ हजार ८७० जना रहेको छ ।
२४ घन्टामा १ हजार ५६६ जना डिस्चार्ज भएका छन् । हालसम्म निको हुनेको संख्या २७ हजार १२७ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जनाए । निको प्रतिशत ६० रहेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७७ १६:३२
भारतीको ‘विगत र बाडुली’